Monoic Monotone White Icon Pack for Nova Launcher 3.2.3 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 3.2.3 လြန္ခဲ့ေသာ3လက
Application မ်ား စိတ္ႀကိဳက္ျပဳျပင္ျခင္း Monoic Monotone White Icon Pack for Nova Launcher
Monoic Monotone White Icon Pack for Nova Launcher ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Nova Launcher ကိုအခမဲ့ Monotone အဖြူရောင်အိုင်ကွန် Pack ကိုအခမဲ့အဘို့နှင့်သင့်ပျင်းစရာဟောင်းဂန္ဖုန်းကို icon တွေကိုအတူ flyer နှင့်အချို့သောအသစ်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်များနှင့်ကြောက်မက်ဘွယ် icon များနှင့်အတူသင့်ရဲ့ Android စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ် tablet စိတ်ကြိုက်ခံရရပ်တန့် - Monoic download လုပ်ပါ။ Monoic လည်း Evie launcher, အထွတ် launcher နှင့်အချို့သောလတ်ဆတ်ကောင်းတဲ့ icon များနှင့်အတူများစွာသောပိုပြီး launchers, launcher go, သင် nova launcher စိတ်ကြိုက်ရစေပါလိမ့်မယ်။
အခုအသစ် icon တွေကိုဗူးနှင့်အတူသင့်ရဲ့ Android device ကို၏အသွင်အပြင်ကိုပြောင်းလဲခံစားပါ။ ဤသည်အခမဲ့အိုင်ကွန်ဗူး app ကိုသင်သည်သင်၏ဂန္ icon တွေကိုပြောင်းလဲပစ်နှင့်သင့် device ကိုရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကြည့်ရှုကြကုန်အံ့ရန်အဘို့အအထူးသဖြင့်ဒီဇိုင်းဖြစ်ကြောင်း 1000 ကျော် monotone, လက်လုပ်ပြီးအလွန် high- resolution ကို icon များပါရှိသည်။ မသာကား! သငျသညျ Monoic install လုပ်ပြီးတာနဲ့သင်က 35 ကျော်လူကြိုက်အများဆုံး launchers အဘို့ဤအကြောက်မက်ဘွယ် icon တွေကိုသတ်မှတ်ထားနိုင်ပါလိမ့်မည်! ဒါဟာအချို့ဖန်တီးမှု icon များနှင့်မှန်မှန်ထည့်သွင်းခံအသစ်ကထူးခြားတဲ့သူမြားနှငျ့ပွညျ့စုံသောကြောင့်ဗူးသင့်ရဲ့ device ကိုပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာဖြစ်စေမည်ဟု icons!
Monoic Monotone White Icon Pack for Nova Launcher အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Monoic Monotone White Icon Pack for Nova Launcher အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Monoic Monotone White Icon Pack for Nova Launcher အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Monoic Monotone White Icon Pack for Nova Launcher အား အခ်က္ျပပါ
nihilnaut0s0store0at0aptoide စတိုး31.19k
Monoic Monotone White Icon Pack for Nova Launcher ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Monoic Monotone White Icon Pack for Nova Launcher အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 3.2.3
ထုတ်လုပ်သူ KD Pixels
လက်မှတ် SHA1: 21:A8:49:D9:7B:28:B5:67:DD:03:DF:4A:D1:FC:7C:29:2A:23:B0:92
Monoic Monotone White Icon Pack for Nova Launcher APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ